Tontosa ny Asabotsy 17 desambra 2016 lasa teo ilay fifaninanan-kira Voix Talen’Est 1ere Edition izay karakarain’ny Onjam-peo Radio Voanio. Mpifaninana miisa 17 no tafiakatra tamin’ny ampahavalon-dalana ka niatrika ny ampahefa-dalana izay notanterahana tao amin’ny Restaurant Bar Sarky’s.
Nafana tokoa ny sehatra tamin’io fotoana io satria dia samy nahay avokoa izay naneho ny talentany,ary tena nanahirana ny mpitsara ihany koa no nitsara an’ireto hoavin’ny mozika vaovao eto amin’ny faritra Atsinanana ireto.
Araka ny maha lalao azy anefa dia tsy maintsy misy ny tafiakatra sy ny tsy tafiakatra,ka 13 no tafiakatra ho amin’ny dingana manasa-dalana raha efatra kosa no tsy tafiakatra tamin’izany. Telo mianadahy no nitsara tamin’ity fotoana ity nahitana an’i Atoa Rado Harilala, Nounous ary Elie Derosse.
Amin’ny asabotsy faha 24 desambra hoavy izao ny lalao manasa-dalana izay hanomboka 3 ora tolakandro, izay hivoizana ny loha-hevitra hoe “Faritra Atsinanana”, ka samy hanao hira avy eto amin’ny faritra Atsinanana avokoa ireo tanora mandray anjara amin’ity lalao ity.
Isaorany ny mpahonana :
Lantomalala : 18-12-2016 - 09:10